Maxaa kasoo baxay shirkii amniga qaranka ee madaxda Soomaalida? - BBC News Somali
Madaxda Soomaalida qaar kamid ah
Mas'uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa isku raacay qoddobo ay kamid yihiin in dowladd goboleedyadu dar-dar geliyaan daraaseynta tirada iyo tayada ciidamada booliskooda oo ay ka mid yihiin daraawiishtu, kadibna la isku dhafo si waafaqsan hannaanka Boolisaynta cusub iyo qaab-dhismeedka amniga qaranka.
Mas'uuliyiinta ayaa markii ay dhageysteen war-bixintii wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxaa ay isla qateen in la saxiixo heshiis ku-meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga kasoo xarooda Kalluumaysiga inta laga soo dhamaystirayo heshiiska guud ee qeybsiga kheyraadka dalka.
7 Maajo 2021
Kenya oo laga oggolaaday in dameeraha la qasho hilibkoodana la iibiyo
Itoobiya oo sheegtay in ay fashilisay qorshe dil oo loo geysan lahaa madax sare
Yaa lagu aasay qabrigii ugu horreeyay ee Afrika laga qoday?
Maxaa loo hadal hayaa wareysiga gabadha Saddaam Xuseen?